"Zidane Ayaa Qaladka Lahaa Falkii Materazzi, Sababtoo Ah... Real Madrid Waxay U Baahan Tahay Kylian Mbappe" - Gool24.Net
“Zidane Ayaa Qaladka Lahaa Falkii Materazzi, Sababtoo Ah… Real Madrid Waxay U Baahan Tahay Kylian Mbappe”
Difaacii hore ee xulka qaranka Talyaaniga ee Fabio Cannavaro ayaa u sheegay kooxdiisii hore ee Real Madrid inay u degdegaan hal ciyaartoy oo ay saxeexiisa u baahan yihiin, kaas oo haddii ay helaan wax badan kusoo kordhin doona.
Fabio Cannavaro oo waraysi siiyey wargeyska AS ee kasoo baxa waddanka, waxa uu tilmaamay in Los Blancos ay ka wiiqan tahay afka hore ee weerarka oo ay u baahan tahay laacib ku fiican dhalinta, garoonka gudihiisa iyo ciyaar samaynta saamayn badan ku leh.
Halyeygan hore oo hadda tababare ka ah waddanka China oo uu ku layliyo Guangzhou Evergrande, waxa uu Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez usoo jeediyey in aanu waqti iska luminin ee uu ka shaqeeyo sidii uu Santiago Bernabeu u keeni lahaa weeraryahanka PSG ee Kylian Mbappe.
Waxa kale oo uu Fabio Cannavaro ka hadlay falkii dhex-maray Zinedine Zidane iyo Marco Materazzi ee sababay in tababaraha Real Madrid uu madax xabbadka kaga dhufto difaaca hore ee Talyaaniga finalkii Koobka Adduunka 2006.
Goolhayihii Real Madrid ee Iker Casillas iyo kubbad-sameeyaha reer Spain ee Andres Iniesta ayuu iyagana ku tilmaamay laacibiinta uu u bogi jiray intii ay garoomada ku jireen.
Isaga oo ka jawaabayay su’aal laga weydiiyey ciyaartoyga uu kula talinayo kooxdiisa hore ee Real Madrid inay lasoo saxeexato, waxa uu yidhi: “Real Madrid waxay u baahan tahay ciyaaryahanno sida Mbappe ah, waa xiddig da’yar oo raaci karaya raadkii Cristiano Ronaldo.
“Waa wax caadi ah in Real Madrid ay doonayso inay la saxeexato isaga (Mbappe), laakiin waa in xisaabta lagu darsado in mulkiileyaasha PSG aanay u baahnayn lacag; waxay leeyihiin damac, waxaanay rabaan inay ku guuleystaan Champions League.”
Cannavaro waxa kale oo uu Real Madrid u sheegay in ay shaqo adag u baahan tahay sidii ay ula saxeexan lahaayeen Mbappe, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in Real Madrid ay ku adkaan doonto inay helaan Mbappe. Madaxweynaha PSG waa qof doonaya inuu guuleysto, si fiican ayaan u aqaannaa, waxayna ku dagaallami doonaan ciddiyaha si ay u xajistaan Mbappe.”
Intaas kaddib waxa uu ka hadlay falkii Zidane iyo Materazzi, waxaanu eedda dusha ka saaray halyeyga hore ee France ee Zinedine oo uu tilmaamay inuu qalad weyn sameeyey ciyaartaas, waxaanu yidhi: “Ixtiraam badan ayaan u hayaa Zidane iyo guulihii uuka gaadhay kubadda cagta, laakiin waxay ila tahay inuu qalad ka sameeyey halkaa, mid weyn waliba. Wax laga xishoodho ayay ahayd in la arko isaga oo ciyaartiisii ugu dmabaysay sidaa ku tegaya. Dadku waxay garoonka dhexdiisa isku yidhaahdaan waxay doonaan laakiin sidaa kuma tagaan. Muu ahayn qalad uu Materazzi sameeyey, laakiin labadooduba way sameeyeen. Wali waan xasuustaa saamayntii ka dhalatay sawaxanka, si wanaagsan ayaanan u xasuusanahay, aad ayay u adkayd.”
Dhinaca kale, Iker Casillas iyo Andres Iniesta ayuu ka hadlay, waxaanu yidhi: “Xidhiidh cajiib ah ayaan la lahaa Iker Casillas, waxaanu wada qaadanay saddex sannadood oo wanaagsanaa. Waxa caado noo ahayd inaanu iska xaraabaadsano. Waanu isku qaylin jirnay anaga oo leh ‘garoonka kaalay, soco.’ Waxay kooxdu ahayd mid nool sababtoo ah waxaanu haysanay Marcelo iyo Ramos.
“Iniesta waxa uu ahaa ciyaartoyga labaad ee ugu wanaagsanaa Spain, waxa uu ku ciyaaray qaab, maad caawin karaynin laakiin waxay ahayd kaliya inaad jeclaato marka aad arag. Wuxuu ahaa xirfadle dhab ah oo aad u wanaagsan, waan jeclaa. Qof walba wuxuu daawan jiray Messi, laakiin anigu waxaan daawan jiray Iniesta.”